सागमा विपक्षीलाई १ अंक नदिई स्वर्ण पदक जित्ने नेपाली चेली - नेपाली प्रोफईंल
७ असोज २०७७, बुधवार http://dansk-elberegning.dk/fr-BE/inibet_28-04-2020
७ असोज २०७७, बुधवार responsible Wednesday, 23 September, 2020
सागमा विपक्षीलाई १ अंक नदिई स्वर्ण पदक जित्ने नेपाली चेली
१८ मङ्सिर २०७६
http://eramosaphysio.com/en-GB/pink-viagra-tablets_07-05-2020 काठमाडौं : कराँतेमा प्रखर मानिएकी अनु अधिकारीले सोमबार १३ औ‌ं सागको पहिलो दिनको ५० केजी तौल समूहमा स्वर्ण जितेकी छिन्। त्यो पनि विपक्षीलाई १ अंक पनि नदिईकन। अनुले फाइनलमा श्रीलंकाकी डन टुउलुलाई हराएकी थिइन् ! ८-० को सोझो सेटमा हराउँदै नकआउट पारिदिइन् उनले। ५० केजी तौल समूहमा प्रतिष्पर्धा गरेकी अनुले सेमिफाइनलमा समेत बंगलादेशका खेलाडीलाई ८-० ले नै नकआउट गरेकी थिइन् ।
अर्थात् उनी विरूद्ध दुवै देशका खेलाडीले कदापी १ अंक जोड्न सकेनन्। स्वर्ण जितेपछि अनुले भनिन्, ‘मैले विपक्षीलाई कमजोर कहिल्यै आकिन र एक सेकेण्ड पनि फोकस आउट भइन।’ सागका लागि आफूले एकदम जमेर तयारी गरेको अनु बताउँछिन्। महिना वारी हुँदा समेत प्रशिक्षण छोडेकी थिइन,’ अनुले एकदम गर्वसाथ सुनाइन्, ‘घाउ चोट लाग्दा पनि अनुशासित भएर आफ्नो प्रशिक्षणमा जुटेँ। त्यसैले मैले अन्तत जीत हात पारेँ। tales of
नेपाली स्टार स्पिनर सन्दिप लामिछानेले देश बिदेशका लिग क्रिकेटमा शानदार खेल प्रदर्शन गरिरहेका छन् । क्रिकेटबाट तारिफ पाईरहेका सन्दिपले पछिल्लो समय भने गित संगितमा पनि आफुलाई आबद्ध गराउँदै आईरहेका छन् ।
यसैबिच सन्दीपले आफ्नो नयाँ गीत सार्वजनिक गरेका छन् । शुक्रबार मात्रै उनले आफ्नो युट्युब च्यालनमा बगि जाने खोलाको के नै भर छर ?…. बोलको गीत अपलोड गरेका छन् । अडियो मात्रै रहेको उक्त गीतको संगीतकार तथा रचनाकारबारे केही उल्लेख गरिएको छैन्। यसअघि सन्दीपका उदास थियो मेरो यो पन…, कता कता आफैंभित्र हराइरहन्छु…, यो झरीमा तिमीसँगै…., ताजै छ मेमरी… जस्ता गीतहरु सार्वजनिक छन्।
सन्दीपका यस अघिका गीत पप लयका थिए । हालको गीतमा भने लोक लय मिश्रित छ । १९ वर्षकै उमेरमा विश्व क्रिकेट दुनियाँमा आफूलाई स्थापित गराउन सफल सन्दीप आफू क्रिकेटर नभएको भए गायनमा लाग्ने बताउदै आएका छन् । क्रिकेटमा स्पीन बलिङको जादूले स्थापित भएका सन्दीप स्वरको जादुले संगीत प्रेमीको मन जित्न कति सफल होलान् ?
प्रतिकृया दिनुहोस् wat is ppro financial ltd